Studio 3Hz – Studio – MMANIME
A3! Information ____________________ Type TV Episodes Unknown Status Currently Airing Aired Jan 14, 2020 to 2020 Premiered Winter 2020 Broadcast Tuesdays at 00:00 (JST) Producers Unknown Licensors Unknown Studios P.A. Works, Studio 3Hz Source Game Genres Music Duration 23 min. Rating PG-13 - Teens 13 or older Review တိုကျိိုမှာ velude way ဆိုတဲ့ နေရာလေးတခုရှိတယ်ပြဇာတ်ရုံတို့ရဲ့မြို့တော်လို့ တင်စားကြတဲ့နေရာလေးပေါ့ အဲ့နေရာလေးကို ...
Dimension W Dimension W Title : Dimension W Episodes: 12 + 13 (Special) Aired : Jan 10, 2016 to Mar 27, 2016 Studio : Orange, Studio 3Hz Source : Manga Genres : Action, Sci-fi, Seinen Duration: 24min per episode Rating : R -17+ (violence & profanity) Translator: Aung Myat Min Plot ကဲ review​ေလး​ေျပာရမယ္​ဆိုရင္​​ေတာ့ ဒီကား​ေလးက ​ေနာင္​၂၀၇၁ခုႏွစ္​​ေနာက္​ပိုင္​းကိုအ​ေျခခံၿပီး႐ိုက္​ထားတဲ့ကား​ေလးပါ။ ၂၀၃၆ခုႏွစ္​မွာလူသား​ေတြဟာစတုတၳ​ေျမာက္​ ႐ႈ​ေထာင္​့(Dimension)တစ္​ခုျဖစ္​တဲ့ ႐ႈ​ေထာင္​့ W(Dimension W)နဲ႔သူ႔ထဲမွာ႐ွိတဲ့သံုးမကုန္​ႏိုင္​တဲ့စြမ္​းအင္​​ေတြကို ႐ွာ​ေတြ႔ခဲ့တယ္​။ အဲ့ဒီနက္​နက္​ထူးျခားတဲ့စြမ္​းအင္​အသစ္​​ေတြကို ထိန္​းခ်ဳပ္​ႏိုင္​ဖို႔အတြက္​ လူ​ေတြက႐ႈ့​ေထာင္​့ W(Dimension ...
A3! Season Spring & Summer ဒီကားလေးကတော့မိန်းကလေးတွေကြိုက်မယ့်ကားလေးပါ ပါဝင်တဲ့characterတွေအကုန်လုံးကလဲအချောတွေပါ ပြီးတော့သီချင်းလေးတွေပါနားထောင်ရမယ့်ကားလေးပေါ့ Review ကတော့ တိုကျိိုမှာ velude way ဆိုတဲ့ နေရာလေးတခုရှိတယ်ပြဇာတ်ရုံတို့ရဲ့မြို့တော်လို့ တင်စားကြတဲ့နေရာလေးပေါ့ အဲ့နေရာလေးကို Izumi tachibana ဆိုတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ သူ့အဖေဆီကို ပို့တဲ့ စာလေးတစ်စောင်ကြောင့်ရောက်ရှိလာခဲ့တယ် သူ့အဖေကိုစာပို့လိုက်တာက အရင်တုန်းက နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ သူ့အဖေလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Mankai ဆိုတဲ့ company ကြီီးကဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်း သူရောက်သွားချိန်မှာတော့ Manaki company ကြီးဟာ ဖျက်သိမ်းတော့မဲ့အချိန်ဖြစ်နေတဲ့အခါ ဘယ်လိုတွေ ကြိုးစားပြီး သူ့အဖေအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ နေရာကို ပြန်ကယ်တင်မလည်းဆိုတာကတော့ ဆက်ပြောနေရင်လဲစာများနေဦးမယ် ကိုယ့်ဘာသာကြည့်လိုက်ကြပါတော့ Translated by Van Van Encoded by Ezekiel Episode 1 Episode2Episode3Episode4Episode 5